ⓘ तियाडी थान
1. तियाडी देवताको उत्पत्ती
तिवारी जातको बाहुन मरेर त्यसैको हंसबाट उत्पन्न भएको यो देवताको नाम पहिले तिवारी देवता भनिन्थ्यो। पछि अपभंश हुँदै गएपछी तियाडी भनिन थालियो भन्ने भनाईका साथै तियाडीको उत्पत्ती नाउले गाउँमा भएको अनुमान गरिन्छ। यसको बारेमा एक कथा यस प्रकार रहेको छ। परापूर्व कालमा एकजना तिवारी ताम्रपत्रमा रैका/राईका आदेशलेखाउने जुम्लाको रैका मल्ल राजाको भान्छे बाहुन थिए। एक दिन राजासँग तिवारीले आफ्नो एक लौकीको विरुवा रोप्ने मन भएकोले लौकीको बिउ रोप्नको लागि जमिन मागे। यो सुनेर राजाले तिवारीलाई दरबार नजिकै लौकीको बिउ रोप्ने आदेश दिए। राजाको आज्ञा पाए पछि उक्त भान्छे बाहुनले दरबार नजिकै लौकाको बिउ रोपे। केही दिन पछि लौकीको विरुवा उम्रेर फैलिन थाल्यो। यसरी फैलिने क्रममा लौकाको मुन्टाले राजगद्दी छुन पुग्यो। यो देखेर राजाले गद्दी छुन लागेको लौकाको मुन्टालाई काटे। यसरी मुन्टा काटे पछि लौकाको लहरा पुरै सुकेर गयो। यसरी लौकाको लहरा सुकेको देखेर तिवारीले राजालाई मेरो लौकाको विरूवा कसरी सुक्यो भनेर सोधे। यो सुनेर राजाले तिम्रो लौकाले मेरो राजगद्दी छुन लागेको थियो मैले त्यसको मुन्टा काटें त्यसैले सुकेको हो भनेर उत्तर दिए। यो सुनेर तिवारीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। तिवारीले राज दरबार भित्र नै आत्मदाह गरेर आफ्नो प्राण त्यागे। तिनै तिवारीको हंश प्राण वायुबाट अग्नि बेताल देवता तियाडीतेडी मष्टो उत्पन्न भए। उक्त तिवारीको हाडबाट हडेनी देवता र मांशबाट मंशानी देवता उत्पन्न भएको किंवदंती पाईन्छ।
2. तियाडीको नेपामा आगमन
नाउलेकटुवालमा तिवारीको हंसबाट उत्पत्ती भएपछी त्यहाँका रामु खंड्का र चामु खंड्का नामका दुबै भाईहरू काँप्न थाले। त्यो देखेर रामु खंड्का लगायत नाउलेका अन्य मानिसहरूले चामु खंड्कालाई नाउले गाउँबाट भगाए। त्यसपछी चामु खंड्का काँप्दै नेपाको देउटाकुरा भन्ने ठाउँमा गएर कराउन थाले। चामु खंड्का कराएको नेपा ५ का चंसु उपाध्याय भन्ने व्याक्तिले सुने। चंसु उपाध्याय देउटाकुरामा गएर चामुलाई तपाइँ को हो किन कराएको भनी सोधे। चामुले आफ्नो परिचय दिएर मलाई बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो। म खंड्का हुँ मलाई मेरा भाईले घरमा बस्न दिएर यहाँ आएको हुँ भने। त्यसपछी चामु खंड्कालाई चंसु उपाध्यायले आफ्नो घरमा लगेर गए। चामु खंड्का चंसु उपाध्यायको घरमा गएपछी चंसुका छोरा हरिदास उपाध्याय पनि काँप्न थाले। यो देखेर चंसु उपाध्यायले आफ्नो छोरासँग किन काँपेको भनेर सोधे। हरिदासले म तियाडी अग्नी बेताल देवता हुँ मलाई तिम्रो छोरा हरिदास मन परेकोले म तिम्रो छोरा माथी चढेको हुँ भने। यो सुनेर चंसु उपाध्यायले म तिम्रो सेवा गर्न सक्दैन तिम्रो सेवा गर्ने मान्छे धौलु कार्की नामको व्याक्ती छन् त्यहीं जाउ भनेर चामु खंड्कालाई पनि धौलु कार्कीको घरमा पठाए। चामुले काँप्न छोडेकाले धौलु कार्कीले चामु खंड्कालाई साथमा लिएर नाउले गाउँ गए। नाउले गाउँ गएपछी पहिले जस्तै रामु खंड्का र चामु खंड्का दुवै भाइ काँप्न थाले। चामु खंड्काले रामु खंड्कालाई काँप्दै तँलाई बाहुन चाहिन्छकी खलीको टाकुरो चाहिन्छ रोज भनेर सोधे पछि रामु खंड्काले "खलि मेरो बाहुन तेरो" भन्ने उत्तर दिए। त्यसपछी रामु खंड्काले नाउलेको खलिमा तियाडीथान बनायर पूजा गर्न थाले भने चामु खंड्का धौलु कार्कीको साथमा लागेर नेपा आए। यसरी धौलु कार्की लगायत नेपाका सबै वासिन्दाहरू मिलेर तियाडीको थान अथवा मन्दिर बनाएर पूजा गर्न थाले। उनै धौलु कार्कीका संतानहरू अहिले सम्म तियाडीका धामी रहँदै आएका छन्। मन्दिरको व्यवस्थापन तियाडी मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितीले गरेको छ। मन्दिरको ढोका खुलेको दिन गाउँमा गोरू जोतेमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यस कारण मुख्य पूजा गरिने दिन बाहेक अरू दिन मन्दिरको ढोका बन्द राखिन्छ।
3. मन्दिर कोष
4. कसरी पुग्ने
Wikipedia: तियाडी थान